sawehlor: Zawgyi Keyboard Installer for Windows 7_8 (64-bit) - ကိုကျော်မြင့်ဦး
Home Movies Blogger Saw Eh Lor News Health Dictionary
Zawgyi Keyboard Installer for Windows 7_8 (64-bit) - ကိုကျော်မြင့်ဦး
Windows7(64-bit) အတွင်းတွင် Alpha Zawgyi Uni-code ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုသောအခါ စာရိုက် မရသည့် ပြဿနာများ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါက Zawgyi Keyboard Layout လေးကို ဒီမှာ DOWNLOAD ပြုလုပ်၍ install တင်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါသည်။ မိမိအသုံးပြုနေသည့် ကွန်ပျူတာရဲ့ Operation System ဟာ 32-bit လား၊ သို့မဟုတ် 64-bit လားဆိုတာကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ရန် My Computer ရဲ့အပေါ်မှာ Right Click တစ်ချက်နှိပ်၍ Properties ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ထိုအခါတွင် အထက်ပါ ပုံစံအတိုင်း System type တွင် 64-bit လား၊ 32-bit လား ဆိုသည်ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ထို့ကြောင့် 64-bit ဖြစ်နေသော သင့်စက်အတွက် Alpha Zawgyi ကို install ပြုလုပ်သောအခါတွင် conflict ဖြစ်နေရခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
Download Zawgyi keyboard (64bit)
Source : ကိုကျော်မြင့်ဦး အဆင်ပြေကြပါစေ။
Posted by saw ehlor at 19:56
Labels: Zawgyi Keyboard Installer for Windows7_ 8 (64-bit)
HTML မိတ်ဆက် Frame & Link အကြောင်း
HTML မိတ်ဆက် Link & Frame အကြောင်း
အန္တရာယ်ရှိသော ကြက်တောင်ပံများ..
Download လုပ်နည်းများ - နေမင်းမောင်
PEEKABOO ပို့စ်ခေါက်နည်း - ညီနေမင်း (နည်းပညာ)
တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ..... - နိုင်းနိုင်းစနေ
ကွန်ပျူတာ မြန်အောင်ပြုလုပ်နည်း - Htun May
ကွန်ပြူတာ Memory သန့် ရှင်းအောင်လုပ်နည်း - ပုသိမ...
Blog and Html - ညီနေမင်း(နည်းပညာ)
ဘလော့ - နေမင်းမောင်
how to remove trojan-dropper vbs agent ? - နေမင်...
Microsoft Windows7complete - နေမင်းမောင်
Windows7- မိုးထက်မြင့် (နည်းပညာ)
ဒီဆောင်းတစ်ည - စိုင်းထီးဆိုင်
အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် - ညီနေမင်း(နည်း...
မိန်းကလေးရင်ထဲက စကား - နိုင်းနိုင်းစနေ
"ကောင်းရော" - စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများ
Genuine Activators For Window Xp, Vista,7(x86/x6...
Window7activated မဖြစ်သူများနှင့် Genuine မဖြစ်သ...
Word 2010 အသုံးပြုနည်း(မြန်မာလို) - ညီနေမင်း(နည်းပညာ)
Excel 2010 အသုံးပြုနည်း(မြန်မာလို) - ညီနေမင်း(နည်း...
Window7အတွက် Zawgyi - မောင်စေတနာ
A-PDF Office to PDF 5.5.0 - ကိုမြတ်
IDM နှင့် ဖြေရှင်းနည်း - နေမင်းမောင်
သင်နှင့်တကွ အပေါင်းအပါများ သိသာရန်
WinRar အကြာင်း - နေမင်းမောင်
ဓါတ်ပုံ Slide Show လေးတွေကို အလွယ်ကူ လုပ်ချင်သူမျာ...
Adobe Reader (E-Book) pdf file ဖတ်ရန်ဆော့ဝဲ
စက်မှုဆိုင်ရာလက်စွဲ စာအုပ် - စင်္ကာံပူရောက်မြန်မာများ
ကွန်ပျူတာမှာအလှလည်းဆင် Alarm လည်းပေးလို့ ရတဲ့ နာရီ...
Zawgyi Keyboard Installer for Windows 7_8 (64-bit)...
Desktop Camstudio Software - မိုးထက်မြင့်(နည်းပညာ)
Desktop Gadgets Error ကိုဖြေရှင်းရန် - နေမင်းမောင်
English - Myanmar Dictionary For Andrious OS - နေမ...
Dream Aquarium Screen Saver
Microsoft Office 2010 အား Active လုပ်နည်း - နေမင်း...
Using System Restore in Windows7and Vista - 11 D...
Windows7Version အနိမ့်ကနေ အမြင့်ကို Upgrade လုပ်...
မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက် IDM - မြန်မာ Mobile APP
Android ဖုန်း / tablet ကိုမြန်မာစာစနစ်ထည့်သွင်းနည်...
USB Write Protected Error - ကိုမြတ်
ပြတင်းပေါက် - ဂျူး
ခဲတံ နဲ့ လူ့ဘ၀ - နိုင်းနိုင်းစနေ